Fanontam-pirinty Network fampidirana sy ny asany - China Changzhou Plet pirinty
Fanontam-pirinty Network fampidirana sy ny asany
Teboka amin'ny fanontam-pirinty mitana andraikitra tena manan-danja. Teboka dia afaka hamindra ny gradations, ambaratonga, ary ny loko ny sary. Any fisaintsainana na fampitana natao ka ny loko na ny volafotsy poti poti mba hanangana mitohy mamelana feo. Io fihetseham-po sy ny sosona mamelana dia tsy maintsy ho sary na hafa fomba ampahany ny sary ho lehibe sy kely teboka.
Teboka no rafitra fototra indrindra ny sary eo amin'ny lovia, ka izy ireo no miandraikitra ny miteraka ny feo avy tany am-boalohany, ny fandaminana ambaratongam-pahefana, ary ny drafitra ny sary. Araka ny fitsipiky ny ny tambajotra, dia azo zaraina ho roa karazana amplitude-modulating harato sy matetika-modulating Network. Ny teo aloha no be mpampiasa. Ny fampiasana ny fomba isan-karazany (fitaratra efijery, fifandraisana efijery, ary herinaratra fisarahana teknolojia) Afaka hahatratra izany karazam-baovao, izay azo ampiasaina be noho ny tsotra, fifadian-kanina, ary ny vokatry ny fitarafana tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny olona koa ny tsy fahampiana fantatra mazava tsara, toy ny fanafoanana ny moire tanteraka, mba toy izany ny fivoaran'ny teknolojia fanontam-pirinty, ny olona nanomboka hitodika ny sainy hafa karazana tambajotra - FM Network baovao.
Ny teorian'ny projection Fanovaovam-peo matetika no vokatra nandritra ny fotoana kelikely. Tany am-piandohan'ny 1993, ny Agfa Diviziona sy Linotype-Hell Corporation fomba ofisialy nanomboka ny FM Network fitiliana teknolojia. Tamin'ny volana Aogositra 1993, Sina Beijing Mpanorina University nitombo ihany koa ny fitiliana ny FM teknolojia.
FM projection teknolojia dia ny sary dia scanned sy torohevitra, rehefa avy fanodinana, ny alalan 'ny Output fitaovana rehefa mitovy habe hevitra dia tsapaka zaraina amin'ny samy hafa toerana, ny isan'ny teboka sy ny hakitroky, izany hoe ny matetika ny endriky ny tambajotra Point, any mba hanehoana ny sary sy ny ambaratongam-pitantanana Density ny fomba ara-teknika. Noho izany, ny fineness ny sary dia maneho fa tsy nanazava ny isan'ny tsipika mainty sy fotsy isaky ny centimeter, fa dia faritana amin'ny haben'ny ny teboka. Ny teboka kely kokoa ny habeny, ny ambony ny marina ny sary izay azo solontena. The tsara kokoa.
Mamokatra ny teknolojia sary izay akaiky kokoa sary vokany. Noho ny hatsiaka ambaratonga samihafa ao amin'ny tsary dingana, zarazaraina ho samy hafa ao amin'ny habetsahan'ny volafotsy photosensitive poti sira ao amin 'ny faritra. Rehefa ny fampandrosoana, misy sira volafotsy vitsivitsy poti amin'ny hakitroky ny ambany eo amin'ny sary, ary maro ireo poti sira volafotsy amin'ny hakitroky ny avo, ary ny hakitroky fiovana dia tapa-kevitra araka ny isan'ny volafotsy sira poti amin'ny faritra samy hafa. Izany dia mitovy amin'ny Network ny FM, ary ny amplitude ny AM toerana dia tsy mitovy. Izy ireo izay voalaza ao amin'ny teboka habeny (isa), noho izany tsy afaka hahatratra ny vokatry ny akaikin'ny sary.
Amin'izao fotoana izao, orinasa efa nampiditra hafa teboka rafitra sy nanome anarana samihafa, toy ny Agfa ny "Crystal Network", Linotype-Hell ny "Diamond Network", Dainippon Screen ny "RANDOT", sns Noho izany, ny isa sy ny toerana fanontam-pirinty teboka isaky ny sary faritra vondrona samy hafa, fa an'ny FM rehetra projection.
Ny harato haben'ny projection ny FM dia miankina amin'ny Output vahaolana sy ny masontsivana fampisehoana any amin'ny tanàna. Ohatra, raha ny Output vahaolana dia 2400 dpi, ary ny fitiliana fikirana dia 2 × 2 tamin'ny laser teboka tambajotra toy ny teboka, ny lamba fanakonana savaivony dia 21 μm; ny projection masontsivana miaraka 3 × 3 tamin'ny laser teboka toy ny teboka, ny teboka savaivony dia 32 μm.
Ao amin'ny dingana rehetra, ny tena antony lehibe dia ny fiovam-po sy ny fanitsiana ny FM Network. Ny fototra dia ny mifidy ny tsara sy ny tamin'ny laser andry randomness savaivony. Ny vao niteraka FM tambajotra hevitra dia malefaka sy matanjaka, fanamiana ny habeny, ary mitokana kely fahazavana toerana, izay ny fanalahidy mba hifehy kalitao. Milina vaovao no mifanaraka tsara typesetting fepetra ity. Ny andry savaivony tamin'ny laser dia azo ahitsy araka ny haben'ny teboka. Ankoatra izany, mba hiara-miasa amin'ny dingana manaraka, ny saina dia tokony ho vola ihany koa ny fisafidianana ny teboka tombony, izay amin'ny ankapobeny azo fehezina ao anatin'ny isan-karazany ny 5%. Ankoatra ny voalaza etsy ambony, ny sary ny sary dia tokony hosasana amin'ny tsara ny hafanana, hafainganam-pandeha, sy ny pH soatoavina, ary tokony hosasana amin'ny haingam-pandeha mafana hajia mba ho azo antoka ny kalitaon'ny ny hevitra. Eo amin'ny fanaovana pirinty, noho ny zava-misy fa tsy misy fetra ny efijery fiolahana eo amin'ny matetika Fanovaovam-peo, ny marina ny fitaovana fa overprinting dia ambany, ary ny loko inks izay ampiasaina matetika dia azo ekena ihany koa.